वरू प्रतिगामी कहलिन्छु भने प्रतिगामी नै सहिGandaki Press
वरू प्रतिगामी कहलिन्छु भने प्रतिगामी नै सहि
साउन २१, २०७८ १०:४२ मा प्रकाशित
म हुर्कदै गर्दा, अलि–अलि बुझ्ने बन्दै गर्दा जनयुद्ध हुदँै जनआन्दोलन भयो । वामपन्थी परिवारको पृष्ठभुमी भएको मेरो घरमा मैले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता धेरै नयाँ–नयाँ शब्दहरू सुन्दै हुर्किएँ । पाउनुपर्ने पारिश्रमीक समयमा नपाएर स्कूलको फिस तिर्न नसकेर रिजल्ट रोक्किदा रिसको आवेगले मुर्मुराएका मेरा बुबा कसरी कम्युनिष्ट हुन पुगे भन्ने बुझ्दै गएँ । घरमा आर्मीले बुट बजार्दै माक्र्स र लेनिनका ठेलिहरू पढ्ने मेरा बाबाको कोठामा छापा मार्दा त्यस्तै ७–८ बर्षको मरो बाल मष्तिस्कमा नराम्रो आघात पुग्न गयो ।
बुबाको छत्रछायाँमा हुर्कदै गर्दा, अझ बुबाले लेख्ने क्रान्तिकारी कविता पढेर हुर्कदै गर्दा, अर्को कोणबाट बुझ्न नपाएको म तिनै क्रान्तिकारी भनिएका एजेन्डातर्फ अलि ढल्कन थालेँ । मेरी दिदी त झन्, त्यहि धरातलमा टेकेर परिवर्तन गर्छु भनि राजनीतिमै होम्मिन पुग्नुभयो । हुन पनि किन नहोस ? हामीले देखेको, बुझेको नै त्यति थियो । त्यो बेलाको समय नै त्यस्तै थियो । गरिब र धनिबिचको खाडलले निम्त्याएको अन्तरद्वन्दबिच हामीसंग आशाको किरण नै त्यहि त थियो । अनि विचार र त्यो विचारले विजारोपण गरेको अग्रगामी कहलिएका सपना पनि त मिठै थियो । विचार त कसैको गलत थिएन ।
यस मानेमा, वरू प्रतिगामी कहलिन्छु भने प्रतिगामी नै सहि ! त्यसैले रविन्द्र मिश्रजीले ल्याएका दस्तावेज “मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश” लाई मिहिन रूपले अध्ययन गर्दा मलाई भने ऐतिहासिक महत्व बोक्ने एक यथार्थपरक दस्तावेज लाग्यो ।
तर, त्यो विचारलाई सहि गन्तव्यमा पु¥याउन चयन गरीएको मार्ग सहि नहुन पनि त सक्दो रहेछ भनेर बिस्तारै बुझियोँ । खैर ! बटुलेका ज्ञान, अनुभव र आफ्नो चेतनाको समिश्रणले जे भन्छ मानिसले त्यहि सहि ठान्दो रहेछ । अझ अभ्यास गर्दै, अनुभव गर्दै जाने थालँे राजनितीमा । सहि र गलत भन्ने सायदै कुनै कुरा होलान् । त्यसैले गन्तव्य चयन गरेर अगाडि बढ्नु महत्वपुर्ण कुरा हो । अनि यात्राको गन्तव्यमा पु¥यान बिचार र सामथ्र्य भएका यात्रीहुनु झनै महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, त्यतिकै महत्वपूर्ण सहि मार्ग पहिल्याउनु पनि हुन्छ । कहिलेकाँहि मार्ग ठ्याक्कै ! ठम्याउनमा कमजोरी पनि हुन सक्छ । त्यो मानविय त्रुटि स्वभाविक पनि हो । कहिलेकाँहि अगाडि बढ्दै गर्दा भिरमा पुग्न पनि सकिन्छ । केहि तेजिला आँखाहरूले त्यो भिर अलि परबाटै देखेर फर्कौ बाटो अलिकति बिराईएछ भन्लान् । त कोहिले “अग्रगमन” “अग्रगमन” भन्दै भिरमै पुगेर देख्लान अनि फर्कलान् ।
साथीहरु, कम्रेडहरू पछाडि फर्कनु त । प्रतिगमन हो त्यसैले भिरै भएपनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै भिरबाट हाम फाल्न पनि तयार हुनु, मेरो लागि त्यति विवेकपुर्ण ठहरीदैन । यस मानेमा, वरू प्रतिगामी कहलिन्छु भने प्रतिगामी नै सहि ! त्यसैले रविन्द्र मिश्रजीले ल्याएका दस्तावेज “मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश” लाई मिहिन रूपले अध्ययन गर्दा मलाई भने ऐतिहासिक महत्व बोक्ने एक यथार्थपरक दस्तावेज लाग्यो । सुरूमा त ती रविन्द्र जसलाई मैले बाल्यकालबाटै नियाले, पछिल्ला समय विताए, तिनै व्यक्तिले आज यस्तो दस्तावेज किन ल्याए होलान् भनेर घोतलिए पनि ।
अनी बुझँे, केहि पढेर, केहि रटेर त केहि देखेर आग्रह–पुर्वाग्रहपुर्ण विचार बोक्नेहरू, आफुलाई केन्द्रमा राखेर, आफुलाई सर्वज्ञानी ठान्दै आफ्नै विचार लाद्न खोज्छन् । त केहि मिश्रजी जस्ता व्यक्ति आफू अनुकुल नभएपनि विचार भन्दा माथि देशलाई राखेर सोच्दछन् ।
PARALEGALS AND THEIR PROFESSION WITH REFERENCE TO LEGAL PROFESSION OF NEPAL